Ukuze ivumelane amakha kusukela Penhaligon sika?
inkampani Penhaligon sika - ingenye endala amakha izindlu emhlabeni. Izwe lakubo - United Kingdom. Iphunga yokuqala yale ndlu amakha yasungulwa ngo-1870. Kakade ngaleso sikhathi amakha Penhaligon sika ngaphumelela engakholekile phezulu eziphakeme emphakathini. Kuze kube manje, wadala phezu 46 flavour esiyingqayizivele futhi ephapheme, okuyinto bathole abalandeli yawo ezingxenyeni ezihlukahlukene zomhlaba. amakha Kugcine yethulwa 2015. Futhi kwathatha isikhathi hhayi kakhulu ukuthatha isikhundla phezulu phakathi yokuthengisa amakha.
Flavour kwangesikhathi Penhaligon sika?
Ngamunye wabo - ekhethekile. imigqa athuthukisiwe kokubili amadoda nabesifazane. Ngaphezu kokuba i flavour emangalisayo eziyigugu kuhlanganiswe. Iphunga ngasinye wadala ngoba ubuntu egqamile futhi yasekuqaleni. Amakha lokhu umakhi has isitayela lihle. Perfume kusukela Penhaligon sika zizohlolwa ngisho Ongoti imikhiqizo izinga kweqiniso.
Ngiyajabula futhi ukuthi iphunga bazokwazi ukuthola ngisho ikhasimende olindele kunazo. Ngempela, amakha endlini inikeza amaklayenti ayo yonke shades flavour ukukhanya isisindo kuze ayegcwele.
Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe amakha - kuba ukuklanywa stylish perfume izitsha eziyisikhombisa. Ziyakwazi icwecwe futhi kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
A amaqiniso ambalwa ezithakazelisayo mayelana amakha Penhaligon sika
Ngaphambili, kwalotshwa ukuthi Penhaligon sika komagazini eziningi ecwebezelayo - lamafutha oluthandayo Princess Diana. Empeleni, lokhu amakha elite kubhekwa omunye okufunwa kakhulu futhi ethandwa kakhulu emhlabeni ngenxa yokuthengisa yayo.
Iyatholakala eziningi limited. Ngakho-ke, kaningi, ukuthenga ukunambitheka ozithandayo, siba kancane izinkinga.
Abathandwayo ngumlando ka ukuvela sha Penhaligon sika. Njengoba umlando usitshela, kwaba umsunguli wayo uHenry Penhaligon. Nguye ngubani ovule siqu yokugunda nobuhle salon yakhe, nakho ukwakha isixuku esikhulu amakhasimende. In parallel umsebenzi gumbi, uHenry njalo UCWANINGO ukudala inhlanganisela ezahlukene flavour. Futhi amakha yokuqala wakhululwa ngo-1870. Lalibizwa ngokuthi Hammamm Bouguet. It yayibuswa ukukhanya ezisawolintshi amanothi. Futhi ngokushesha le ukunambitheka ukukhuluma konke.
Khona-ke baqala ukuvela nezinye flavour. Kukulo muzi lapho, e-London, kugeleze yonke phezulu inkampani ngenxa yokufuna Iphunga amasha. Ngokushesha ezitolo nge uphawu Hammamm Bouguet kwaqala ukuvela ngaphandle kwe-England. Adume kwaba le ukukhiqizwa eFrance, e-Italy, eSpain nakwamanye amazwe aseYurophu.
Futhi namhlanje, amakha endlini Penhaligon asihambisani balahlekelwe izikhundla zawo. Namuhla, manje samuntu zabuna ngesiNgisi. Ukuze ukukhiqizwa nokuthuthukiswa amakha entsha izindlela ezisetshenziswa nabadala futhi inhlanganisela yokuqala izithako.
Enye plus - kungcono lugcwele izinto eziningi le ako kusuka endlini amakha. Ngempela, ukuthola okuthile okuhlukile lapha can ngisho ikhasimende olindele kunazo.
Amanzi toilet Trussardi Ngokucophelela Rose: incazelo ukunambitheka nezilinganiso
"Deshale" izimonyo. Izibuyekezo umthengi
Zinhlayiya Smart DeSheli ubuhle kanye nentsha
Imimoya "Halloween": incazelo ukunambitheka kanye nokubuyekeza
Funda kabanzi mayelana nokuthi kungani "U-Agata Kristi" ukuhlukaniswa
Kungani kwadingeka isongo: incwadi iphupho. Kungani iphupho igolide isongo isongo obomvu
I-cosmodrome enkulu kakhulu eRussia. I-Cosmodromes yaseRussia
Enclosure ngoba plasterboard: usayizi. Ukufaka Enclosure e okwakhiwa ngalo la mabhodi
Kuyini Ngosuku lokuqala, futhi kanjani ukusebenzisa izwi